China uthi ANGEKE kwesami Antarctica kodwa itjengisa 'ukuthuthukiswa obunokuthula izinsiza' - China JP Metal nethulusi
China uthi ANGEKE kwesami Antarctica kodwa itjengisa 'ukuthuthukiswa obunokuthula izinsiza'
China wafuna sixoshe ukukhathazeka mayelana izifiso zayo e-Antarctica amaminerali-ocebile ngoMsombuluko, nesikhulu ethi Beijing ayinakho izinhlelo ukuqala yezimayini kuleli zwekazi elikhulukazi.
China ka- imisebenzi wanda ezindaweni ezikuma-pole kuyinto ebalulekile njengoba Beijing iphatha emhlanganweni wonyaka we-Antarctic Treaty okokuqala.
Kwaba nezihambeli ezingaba ngu-400 ezivela emazweni angu-42 kanye nezinhlaka zamazwe 10 ababeba khona iforamu, okuyinto iqale ngoMsombuluko futhi iphela ngoJuni 1.
'Kukhona namanje igebe phakathi umgomo yentuthuko obunokuthula izinsiza Antarctica nokuqonda kwethu Antarctica,' Lin Shanqing, yiphini lenhloko yasesifundeni sase-Oceanic Administration, etshela abezindaba sibukela sezingxoxo.
Lin abazange baphendule umbuzo ukuthi wayesho ngu nentuthuko obunokuthula naye kodwa wagcizelela ukuthi 'gxila andisa ukuqonda kwethu ne-Antarctic futhi ukonga kangcono imvelo Antarctic.' Uhambo China sika-Antarctic
'Ngokusho ulwazi lwami, China ukwenze awuhlele kwenza lutho ngomsebenzi izimayini e-Antarctica,' Lin wanezela.
Ochwepheshe baye baveza ukukhathazeka ukuthi China ofukamela umgomo eside yokukhipha izisetshenziswa kusuka kuleli zwekazi, lapho-Antarctic Treaty okwamanje azenqabelayo.
Nokho, i-protocol yalesi sivumelwano enqabela eluhlaza ukususwa impahla umsebenzi ovela nezwekazi engena wokubuyekeza 2048.
'2048 kubonakala sengathi ibanga elide, kodwa ... kube unokukhathazeka kwaba ephakanyiswe ukuthi Beijing ehlakulela eside' hedging 'isu uma nezwekazi ziphonswe ivulekele Resource Development, kuhlanganise izimayini kanye uwoyela negesi imishini, esikhathini esizayo , 'Marc Lanteigne, womfundisi ku inqubomgomo angaphandle Chinese at Massey University, etshela i-AFP.
'Nokho, ngezinye China samanje kuthatha ukunakekelwa okukhulu ukuze agcizelele izici ngokwesayensi ukuthi inqubomgomo yayo polar, ukukhuthaza ukubambisana namanye ohulumeni, sixoshe ukukhathazeka ukuthi amandla revisionist e-Antarctica,' kusho Lanteigne.
amazwe ahlukahlukene silondoloze elisekela e-Antarctica, isikhala wabe ucwaningo lwesayensi ngaphansi samazwe onke 1959, okuyinto China wajoyina ngo-1983.
China okwamanje iziteshi ezine ucwaningo kuleli zwekazi futhi okwesihlanu ehleliwe 2019, oluzobeka China zilingana nezinhlobo US ngo inombolo elisekela.
'Hosting umhlangano e-Beijing yithuba China ukuthola ukwamukelwa international (esanda) isikhundla bawo abavelele ezindabeni Antarctic,' kusho u-Anne-Marie Brady, onguchwepheshe ezombusazwe Chinese polar e-University of Canterbury, New Zealand.
China angeke efuna noma yiziphi izinguquko ezikhona emthethweni Antarctic maduze, Brady etshela i-AFP.
Kodwa yena waphawula baye 'madolonzima ukwandisa izinyathelo nokongiwa, njengoba kuboniswa ukuphikisana iziphakamiso izindawo zasolwandle ezivikelwe e Southern Ocean.'
isikhathi Iposi: May-23-2017
Inkampani: JP METAL & imishini Co., LTD
Ifeksi: + 086-010-88696156
China uthi ANGEKE kwesami ...
China wafuna sixoshe ukukhathazeka mayelana izifiso zayo e-Antarctica amaminerali-ocebile ngoMsombuluko, nge zwi olusemthethweni Bei ...
Argentina ukuba kudlule izimayini entsha la ...
Iziphathimandla Argentina, umkhakha abadlali nezinyunyana kulindeleke ukuba asayine kuleli sonto a eside elindelwe izimayini federal uyavuma ...